ဒေါင်းတမာန်: 06/28/2009 - 07/05/2009
There is one case at University of Computer Science, Hlaing Campus. There is one training which is organized by JICA and JICA selectsafew candidate from staffs of Ministry of Science and Technology. One candidate from this training course did post about swing flu at Internet. The news is already published into Seven Eleven journal. Her attention is just to spread the knowledge of Swing Flu and dont intend to scare to public. The intention is very simple and noble. But unfortunately, she gotaproblem because of this post. The post was seen by Doctor Nila Thein (also famous for "Thone thein Ta thoung" in Myanmar). "Thone thein" means the three sister of Daw Nila Thein, Daw Thandar Thein and Daw Yadanar Thein and "Ta thoung" stands for Minister U Thaung who advised Than Shwe to rule. She report this case to Minister and draw this case to politics. Now the staff who did this post is under investigation and probably terminate the course and transfered to country side.
There was alsoacase she did badly to staff. Last year there isavote of YES/NO for elecation. There wereafew staffs voting NO to this. Daw Nila Thein listed those staffs voted NO and reported to Junta. You can imagine what happen to those staffs. What we want to say is that we should get rid of this public enemy Daw Nila Thein as soon as possible. One day, we should bring out this criminal to court and should purnish to her.
If you get any information of Daw Nila Thein, please share to public and bring out for Truth.
Lets Fight All public enemy!!!!!
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, July 04, 20090comments
Democratic Voice of Burma: North Korea exporting weapons overland to Burma – Francis Wade Thu2Jul 2009 Filed under: News, Inside Burma
“Not every [North Korean] ship is government owned or government managed - North Korean crews sometimes operate under foreign companies,” he said.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဘန်ကီမွန်းကို တွေ့ခွင့်မပေး Friday, 03 July 2009 18:42 အေးချမ်းမြေ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရေးကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက တောင်းဆိုရာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များက ငြင်းပယ်လိုက်သည် ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
[မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းနှင့် ခွေးမမှူးကြီးသန်းရွှေတို့ နေပြည်တော်တွင် ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Getty Images)]
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် ယနေ့တွင် နေပြည်တော်၌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ၂ နာရီကြာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့စဉ် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်ရရန် တောင်းဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“သူ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) နဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့ ပြောပြီး ဘာပြန်ပြောမလဲဆိုတာကို စောင့်နေခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စက သိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်” ဟု မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက သတင်းထောက် များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပါတီ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးကိုလည်း မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန် ယမန်နေ့က နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း ကြားသိရသည်။
NLD ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် (CEC) များ ဖြစ်ကြသော ဦးလှဖေ၊ ဦးညွန့်ဝေ၊ ဦးစိုးမြင့်နှင့် ဦးသန်းထွန်းတို့ ၄ ဦးကို ယမန်နေ့ နေ့လယ်က စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက ကားဖြင့် လာရောက် ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း NLD ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
NLD ၏ CEC အဖွဲ့ဝင်များအနေနှင့် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း မလာရောက်ခင်ကပင် ကြိုတင်၍ ၎င်းအား တင်ပြမည့်အချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ အဓိကအချက်များမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားများအား လွှတ်ပေးရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က စစ်အစိုးရ အတည်ပြုခဲ့သော အခြေခံဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင်ဆင်ရေး စသည့် အချက် ၃ ချက် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးဝင်းတင်က မစ္စတာဘန်ကီးမွန်းအနေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့သည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ သူဖြစ်နေတော့ လုံခြုံရေးအရဆိုပြီး တွေ့ခွင့်ပေး လိမ့်မယ် မထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကျနော့်အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို တွေ့တယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း တွေ့စေချင်တယ်” ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ သူက ယခုတကြိမ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းသည် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတခု၏ ခေါင်းဆောင် တဦး အနေနှင့် မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်ခြင်း ဆိုသည်ထက် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ကြားဝင်စေ့စပ် ဖြန်ဖြေသူ ပုံစံဖြင့် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
“ကြားဝင်စေ့စပ် ဖြန်ဖြေတယ် ဆိုကတည်းက ဘက် ၂ ဘက်ရှိတယ်။ ဒီတော့ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ မစ္စတာဂန်ဘာရီလို စစ်အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီး သူတို့ စီစဉ်သမျှကို ခေါင်းညိတ် ပြန်သွားတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ အဲဒီလိုဆိုရင် ပြည်သူလူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်တွေ၊ တောင်းဆိုမှုတွေကို သစ္စာဖောက်သလို ဖြစ်မယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
NLD ခေါင်းဆောင်များက မစ္စတာဘန်ကီမွန်း၏ ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မျှော်လင့်ချက်မရှိဟု ဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းပါတီ ခေါင်းဆောင်များအားလုံးက ယခုကဲ့သို့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည်၏ အရေးကိစ္စကို လာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက် ကြိုဆိုသည်ဟု ပြောသည်။
မြန်မာပြည်သို့ မလာခင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သော မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက “ဒီခရီးစဉ်မှာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး တင်ပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါမယ်” ဟု ဂျပန်သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များအပါအဝင် အတိုက်အခံ အဖွဲ့များအားလုံးနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတစွာ ကျင်းပပေးရေး စသည့်အချက် ၃ ချက်ကို နအဖ အစိုးရအား အဓိက တောင်းဆိုမည်ဟု ဆိုသည်။
နယူးယောက်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က မစ္စတာဘန်ကီမွန်းအနေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းသင့်သော်လည်း စစ်အစိုးရ ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုမူ တရားဝင်ကြောင်း ပြောရန်မသင့်ဟုဆိုသည်။
အမှုဆောင် အရာရှိ Kanneth Roth က “မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ခရီးစဉ်ကို အသုံးချပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားဝင်တယ်လို့ လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
NLD ခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်ကလည်း မစ္စတာဘန်ကီမွန်း တောင်းဆိုမည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ကိစ္စကို သဘောတူသော်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်က စစ်အစိုးရ အတည်ပြုခဲ့သည့် အခြေခံဥပဒေ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရေးကို မပြောဘဲ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စပြောဆိုခြင်းကို သဘောမတူကြောင်း ပြောကြားသည်။
နေပြည်တော်၌ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့ တွေ့ဆုံမည့် ယနေ့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ သက်သေ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးကို စစ်ဆေးမည့်နေ့ဖြစ်သော်လည်း လာမည့် ၁၀ ရက်နေ့သို့ ရုံးချိန်း ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ယခုကဲ့သို့ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း လာရောက်ချိန်တွင် ရုံးချိန်းရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ခြင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တစုံတရာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သုံးသပ်သည်။
စံခလပူရီ(ဇူလိုင်-၃)။ ။ ယနေ့နံက်တွင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် စင်ကာပူမှတဆင့် မြန်မာပြည်ကို ရောက်ရှိလာသည်။ “မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အလေးအနက် တိုက်တွန်းဖို့အတွက် မြန်မာပြည်ကို သွားရောက်လည်ပတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟုကြိုတင် ကြေညာခဲ့သည့်အတိုင်း ဇူလိုင်လ ၃၊ ၄ ရက်နေ့တို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နေထိုင်သွားမည်ဟု ယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်သော UN Press Review တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
ဘန်ကီမွန်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးယမန်နှစ်ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြစဉ်(23 May 2008)
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တွေ့ဆုံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ဂျာမနီမှ DPA သတင်းတစ်ရပ်ကို ကိုးကားပြီး ယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်သော ယင်း UN Press Review တွင်ဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။ တိုကျို၌ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့စဉ် “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့ မြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်တွန်းသွားမယ်” ဟုဆိုခဲ့ပါသည်။
ဘယ်လဂျီယံမှ De Morgen သတင်းတစ်ရပ်တွင် “မစ္စတာဘန်ဟာ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် စွမ်းနိုင် လိမ့်မယ်လို့တော့ မမျှော်လင့်ပါဘူး”ဟု မှတ်ချက်ပြုထားပါသည်။ စစ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုသာ အကျိုးအမြတ်ဖြစ်စေ
မည်ဟု သံသယ ရှိနေကြသူအလွန်များကြောင်း ထိုသတင်းတွင်ထပ်မံ သုံးသပ်ထားပြန်သည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းသည် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၄ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံး လာရောက်ခဲ့သည့် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်ခဲ့ဖူးသည်။ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း မြန်မာပြည်ကို လာရောက်နိုင်ရန်အတွက် မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ၏ အစီရင်ခံစာအပေါ် မူတည်ခဲ့သည်ဟု သတင်းဌာနများက ယူဆထားကြပါသည်။ AFP သတင်းဖေါ် ပြမှုတစ်ရပ်တွင် မစ္စတာဘန်သည် မြန်မာအာဏာပိုင်တို့၏ တရားဝင် ဖိတ်ခေါ်မှုကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
AFP သတင်းရေးသားချက်တစ်ရပ်တွင် ဘန်၏ခရီးစဉ်သည် “မသေချာမှုတွေကြားထဲက စွန့်စားမှုတစ်ခု” ဟု သုံးသပ်ထားပါသည်။ မစ္စတာဘန်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးကို ထိရောက်စွာ မဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့လျှင် အလွန်ကြီးမားသည့် ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်သာဖြစ်ကြောင်း လွန်ခဲ့သည့်ကြာသပတေးနေ့ AFP သတင်း တွင် သုံးသပ်ချက်များကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
အယုတ်မာဆုံး အုပ်ချုပ်သူသမိုင်းမှာ ဟစ်တလာအုပ်စုပြီးရင် ခွေးသူတောင်းစား သန်းရွှေအုပ်စု
“ဒီနေ့က ဒေါ်ခင်မို့မို့ကို စစ်မေးရမှာ မမေးဖြစ်ဘူးလို့ကြားတယ်။ ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့ ပြန်လာရင်တော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရမယ်။ အခုသေချာတာကတော့ (၁၀) ရက်နေ့ကို ရုံးချိန်းပြောင်းလိုက်တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ထို့နောက် တရားရုံးတွင် အာဏာပိုင်များဘက်မှ တရားလိုပြသက်သေ (၂၃) ဦးတင်သွင်းခဲ့ရာ တရားရုံးက (၁၅) ဦး၏ ထွက်ဆိုချက်ကို ရယူခဲ့သည်။
သက်သေပြင်ဆင်ခွင့်အယူခံအတွက် ဗဟိုတရားရုံးအထိတက်ရောက်ခဲ့ရပြီး ဗဟိုတရားရုံးက ဇွန် (၂၉) ရက်တွင် အယူခံကိုပယ်ချလိုက်ရာ အင်းစိန်ထောင်အထူးတရားရုံးက ယနေ့တရားခွင်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးက ထပ်မံခွင့်ပြုခဲ့သော သက်သေ ဒေါ်ခင်မို့မို့ကို စစ်မေးရမည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့အင်းစိန်ထောင်အထူးတရားခွင်ရုံးချိန်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ်တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့် တရားခွင်ရုံးချိန်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ရန်ကုန် နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောဆိုသည်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများ ပြေလည်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေရာ နအဖစစ်အစိုးရ အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၀) ခုနှင့်လည်း တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းသွားမည် ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံခရီးမစတင်မီ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရှိနေစဉ်ကပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွှတ်ပေးရန် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တောင်းဆိုထားသည်။
7 july အမှတ်တရပါ ကျောင်းသားဆိုတာဟာ ပွင့်လင်း ရိုးသားပြီး ဖိနှိပ်မှု၊ မတရားမှုကို မကြိုက်တဲ့ သဘာဝ ရှိပါတယ်။ ခေတ်ပညာ တတ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ နဲ့ယှဉ်ကာ အမြင်ကျယ် အသိဥာဏ် ကြွယ်ဝသူတွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ နယ်ချဲ့ကိုလိုနီ လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ "အာဇာနည် သူရဲကောင်း" တွေဟာ ကျောင်းသားတွေက ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါလား ခင်ဗျား။ ကျောင်းသား သမဂ္ဂနဲ့ကျောင်းသားတွေ ဟာ လွတ်လပ်ရေး ရရှိမှု ပြဿနာ၊ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး ပြဿနာ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ အခွင့်အရေး ပြဿနာ၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပြဿနာ စတာတွေကို အကြိတ်အနယ် ဖြေရှင်းတောင်းဆို ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ (၂) ရက်နေ့ ၊ ဗိုလ်နေ၀င်း အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အခါ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ပထမဆုံး ဆန့်ကျင် ကန့် ကွက် ခဲ့တာ ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးပြီးချင်း မတ်လ (၃) ရက်နေ့ မှာ (ဗကသ)၊ (တကသ) နဲ့(ရကသ) တို့ပူးတွဲပြီး ကြေညာချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ကာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်း ခြင်းကို ကန့်ကွက်လိုက်ကြပါတယ်။ ဖဆပလ၊ ပမညတ စတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေက စောင့်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ် ထားတဲ့ အချိန်မှာ ကျောင်းသားတွေက ပြတ်ပြတ်သားသား ကန့် ကွက်ခဲ့ကြလို့ဗိုလ်နေ၀င်းက အာဃာတ တရား ထားခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့် ခွဲရေးကို ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနက တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုဖို့တော်လှန်ရေး ကောင်စီက မေလ (၉) ရက်နေ့ မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေ မှာ ပါတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကို တော်လှန်ရေး ကောင်စီက ကျင့်သုံးမှာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျောင်းသား တွေကို နှိပ်ကွပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ ကျောင်းဆောင် စည်းကမ်းချက် (၂၂) ချက်ကိုလည်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မေလ (၁၀) ရက်နေ့တက္ကသိုလ် ကောင်စီဝင်တွေကို ဗိုလ်နေ၀င်းက ဒဂုံရိပ်သာ မှာ ခေါ်ယူတွေ့ ဆုံပြီး မူလတက္ကသိုလ် ကောင်စီကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ အကြောင်း ပြောဆို ကြေညာခဲ့လို့ကျောင်းသားထုအတွင်း မကျေနပ်မှု ပိုမို များပြားခဲ့ပါတယ်။
မေလ (၂၇) ရက်နေ့တက္ကသိုလ် ကောင်စီကို တော်လှန်ရေး ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်အမိန့်(၃၀) နဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ အခါမှာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေ မပါဝင်ဘဲ စစ်အာဏာရှင် အရာရှိကြီးတွေနဲ့သာ ဖွဲ့ စည်း ထားလို့ကျောင်းသားများ ပေါက်ကွဲ ခဲ့ပါတယ်။ မေလ (၃၁) ရက်နေ့မှာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ပြေလည်မှု ရှိတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ သာလှကို ရာထူးက ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ဆရာ သင်္ချာ ပါမောက္ခ ဦးကာ အား အစားထိုး ခန့် အပ်လိုက်ရာမှ အာဏာရှင်အစွယ် ဘီလူး ပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်။ အမှန် မှာ တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေအရ ပါမောက္ခချုပ် ရာထူး လစ်လပ်ရင် ပါမောက္ခတွေထဲက ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံ ခွင့်ရှိပြီး တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ ရ အသင်းဝင်တွေ လျှို့ ဝှက် မဲပေးကာ ရွေးကောက်တင်မြောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေ ထုတ်ပြန်တဲ့ ပညာရေး စည်းကမ်းသစ်တွေဟာလည်း လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တဲ့ အချက်အလက် တွေ များစွာ ပါရှိလို့ကျောင်းသားတွေက ထောက်ပြပြီး ကန့် ကွက်မှု ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ တကသ အဖွဲ့ မှ ပါမောက္ခချုပ် ရုံးကို တရားဝင် စာပေးပို့ ခဲ့ပေမဲ့ ပြန်ကြားမှု တစ်ခု မှ မရခဲ့လို့အုပ်ချုပ်ရေး အပိုင်း နဲ့ကျောင်းသားများအကြား တင်းမာ မှု ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Friday, July 03, 20090comments
ကိုဟန်လေး ရဲ့ 
Democratic Voice of Burma: Burmese wary of UN chief’s visit – Naw Say Paw Wed 1 Jul 2009 Filed under: News, Inside Burma
Burmese politicians have expressed fear that Ban Ki-moon’s visit to Burma will achieve little without concerted attempts to meet National League for Democracy members, including Aung San Suu Kyi.
The UN Secretary General is due to arrive in Burma on Friday onatwo-day visit, the exact itinerary of which is unknown.
Senior members of the National League for Democracy (NLD), as well asanumber of human rights groups, have said however that the trip will be meaningless unlessameeting with NLD members, and even Suu Kyi, is secured.
“If [Ban Ki-moon] can spare two days to meet with the junta, he should also consider trying to findaway to meet with the other side,” said NLD Central executive Committee member U Win Tin.
“If not, and he leaves Burma having only made friends with the junta, then this trip would be meaningless.”
The trip followsatwo-day visit last week by UN envoy to Burma Ibrahim Gambari, which ended on Sunday and was widely believed to have paved the way for Ban’s arrival.
The UN chief was initially wary of accepting the invitation to visit Burma over concerns that the government might use the trip for propaganda purposes.
Bo Kyi, joint secretary of the Assistance Association for Political Prisoners-Burma (AAPP), said that the trip may be too brief to achieve the UN’s goals of ensuring the release of all of Burma’s 2,100 political prisoners.
“Without seeing these people, he would not get an idea of how they are feeling and it might become more difficult for him to solve the problems,” he said.
Veteran Burmese journalist Ludu Sein Win said yesterday that the UN “is likeatoothless tiger with no executive power”.
“Burma is like North Korea. The junta doesn’t care about anything apart from their holding of the power,” he said.
The trip comes atasensitive time, with the trial of Suu Kyi now in its seventh week and evidence of strengthening ties between Burma and North Korea, who were last month subject to toughened UN sanctions.
It is unclear whether the latter issue will be raised during the UN chief’s visit.
နအဖတပ်ရင်းမှူး၏အမိန့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ မလိုက်နာ NEJ / ၂ ဇူလိုင် ၂၀၀၉
Yat Won Thit Vol2July 2009
သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်မြို့ ဈေးရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ဆေးရုံရှေ့တွင်ဖွင့်ထားသည့် ဝင်းကိုနိုင် ဆံသဆိုင် ၌ လက်ပစ်ဗုံး တစ်လုံး တွေ့ရှိရသဖြင့် အနီးနားရှိဒေသခံများ အထိတ်တလှန့်ဖြစ်ကြရကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့ ညနေ (၃) နာရီခန့်က အဆိုပါဆံသဆိုင်သို့ ဆံပင်ညှပ်လာသည့် အမျိုးသားတစ်ဦး မေ့ကျန်ခဲ့သည့် လက်ကိုင်အိတ် အတွင်းမှ လက်ပစ်ဗုံးတွေ့ရှိရသဖြင့် ဆံသဆိုင်အတွင်း ဗုံးတွေ့သည်ဆိုကာ ဒေသခံများ စိုးရိမ်ထိတ် လှန့်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗုံးတွေ့ရသည့် အခြေအနေအား အာဏာပိုင်များ ထံအကြောင်းကြားလိုက်ပြီးနောက် ဗမာရဲနှင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့များ ရောက်ရှိ လာကာ ဆိုင်အတွင်း ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။
“ဆံပင်လာညှပ်တဲ့ သူဆီက ပိုက်ဆံအိပ်မေ့ကျန်ခဲ့တာ အိပ်ထဲမှာက လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးနဲ့ ပိုက်ဆံနဲနဲပါးပါးတွေ့ တယ် နောက်ကားလိုင်စင်အဲဒါလည်း တွေ့တယ်လို့ပြောတယ် ဆိုင်ရှင်ကိုလည်းခေါ်သွားတယ် ဆိုင်ကိုလည်းပိတ် ခိုင်းထား လိုက်တယ် ဘယ်သူ့ဟာလည်းဆိုတာတော့ မသိဘူး မနေ့ကတော့ ဆိုင်ရှေ့မှာတော့လူတွေဝိုင်းအုံနေတာပဲ ” လို့ သူကပြောသည်။
လက်ပစ်ဗုံးမေ့ကျန်ခဲ့သူသည် ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီလိုက်နေသည့် ရဲတပ်သားတစ်ဦး၏ ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဗုံးကိုင်ဆောင် သူကိုတော့ ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ကြောင်း မူဆယ်ရဲအသိုင်းအဝိုင်းက ပြောသည်။
မူဆယ်ရဲစခန်းနှင့်နီးစပ်သူက “ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသယ်နေတဲ့ ရဲတပ်သား တစ်ဦးရဲ့ လက်ပစ်ဗုံးလို့ ယူဆ ထားတယ် လူကိုတော့ရှာနေတုန်းပဲ ချိန်ကိုက်ဗုံးမဟုတ်ဘူး လက်ပစ်ဗုံးပါ ” လို့ ပြောသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Thursday, July 02, 20090comments
ငွေစက္ကူအဟောင်းအနွမ်းများတွင်လူကိုသေစေနိုင်လောက်သောရောဂါများပါရှိ။ဖြစ်သည်.တီဘီရောဂါကဲ.သို.ရောဂါပိုးမွှားများပါဝင်သည်ကိုတွေ.ရှိရကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှစူးစမ်းရှာဖွေလေ.လာသူသုတေသီပညာရှင် များကတွေ.ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရ သည်.သတင်းလေးတစ်ခုပြန်တင်ပြချင်ပါတယ်....
ဓါတ်ခွဲခန်းမှာစမ်းသတ်ခဲ.တဲ.ငွေစက္ကအဟောင်းအနွမ်းအဆုတ်အပြဲ အရွက်၇၀ ရဲ. ၈၀ ရာခိုင်နှုံးကျော်မှာတီဘီရောဂါဖြစ်စေတဲ.ပိုးမွှားတွေတွေ.ရပြီး ၆၅ ရာခိုင်နှုံးကတော.အဆုတ်အအေးမိရောဂါ၊လည်ချောင်းယောင်ရောဂါနဲ.အစာအိမ်ရောဂါတို.ဖြစ်ပွားစေတဲ.ပိုးမွှားတွေ တွေ.ရပါတယ်တဲ. ...
အနှစ် နှစ်ဆယ်နီးပါး တည်ဆောက်သော်လည်း လမ်း၊တံတားများ ဆောက်၍မကုန်နိုင်
ပေးပို့ သူ ကိုဒေါင်းနီ-
• နိုင်ငံတကာသတင်းဆိုသည်မှာ CCTV ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
• အခြားနိုင်ငံမှ မိမိထံလာပါက "ဂါဝရပြုတွေ့ဆုံ"ရန်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ၊
ရောက်တွေ့ ဆုံ" ဟုသုံးစွဲရသည်။
• သတင်းကြော်ငြာနေစဉ် နောက်မှလူတစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ
• နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းဆိုသည်မှာ "တရုတ်" သို့မဟုတ် "ကိုရီးယား"
• ပြည်သူလူထုဆိုသည်မှာ "အဖြူနှင့်အစိမ်း" သို့မဟုတ် “အဝါရောင်ဝမ်းဆက်”
ရောင်ဝမ်းဆက်" များသာ ဝတ်ဆင်ကြသည်။
• မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ကြီးမားလွန်းသဖြင့် နေ့မအားညမနား အနှစ်
တည်ဆောက်သော်လည်း လမ်း၊တံတားများ ဆောက်၍မကုန်နိုင်။
• နိုင်ငံတော်၏အသုံးစရိတ် နှင့်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း
• ယင်းသို့မထုတ်ပြန်သော်လည်း လမ်း၊တံတား၊ဆည်မြောင်း
• စစ်သားများပင်ဖြစ်လင့်ကစား နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ သည်
အဆုံး ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်ကြရာ ဝိနည်းတော်နှင့်အညီ နေထိုင်နိုင်ရန်
• မည်သည့်အခါမှ အစိုးရနှင့်ပြည်သူ သဘောထားကွဲလွဲမှုများမရှိသော်လည်း
ရိုး"ဆိုသည့်လူနည်းစု အတွက် မြန်မာ့အသံမှ "စစ်မှန်သောမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်"
• နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ ဘုရားကျောင်းကန်တက်ခြင်း သည် သတင်းထူးဖြစ်သည်။
• ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနှင့်ဆရာ၊ ဆရာမ များသည် ပညာရေး၏အရေးပါပုံကို
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများက ရံခါမလပ် ပညာရေးသည်အရေးကြီးသည်ဟုမှာကြားရသည်
• အမြဲကြားရလေ့ရှိသည့်စကားလုံးများ"ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း နှင့်
• အမြဲ မကြားရ သောစကားလုံးများ "စီးပွားရေးကျဆင်းခြင်း ၊
• မေးခွန်းနှင့်အဖြေ မှန်အောင်မဖြေ နိုင်ပါက ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး
ဖြစ်နိုင်သည်။ (မှတ်ချက်။ ဥပဓိ
ဆရာဝန်ဦးဏှောက် ၅၀ သား -------------------၅၀၀၀ ကျပ်
ရှေ့နေဦးဏှောက် ၅၀ သား ---------------------၆၀၀၀ ကျပ်
ကျောင်းဆရာဦးဏှောက် ၅၀ သား --------------၇၀၀၀ ကျပ်
ကြံ့ဖွံ့ဦးဏှောက် ၅၀ သား-----------------------၄၀၀၀၀ ကျပ်
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Wednesday, July 01, 20090comments
ဗမာပြည်ကို တရုတ် ကုလား ရရှား လုပ်ချင်သလိုလုပ် ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတာပါဘဲ။ ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုတော့ လင်သေသွားတဲ့ မုဆိုးမကို ရပ်ကွက်က၀ိုင်းစွဲ နေသလိုပေါ့။ ဗမာပြည်က ရစရာကိုမရှိတာ မျက်စိမှိတ်ထားတာတောင် မမြင်ချင့်ဆုံး နားကကြားနေရတယ် ။
ပြည်သူတွေ ခွက်လက်စွဲကာ တောင်းစားနေကြတယ်ဆိုဘဲ။
သန်းရွှေနဲ့ အမျိုးတွေကတော့ အနူတောမှာ နူချောတွေ ဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ ။ အော်တဲ့ သူပစ်မယ် ရေဒီယိုဥပဒေတို့ဗီဒီယိုမှု အင်တာနက်မှု ဗမာပြည်မှာ ရှိနေပြီတဲ့ ဗျ ။
ဘုန်းကြီးတွေ ဆွမ်းမ၀ကြတော့ပါတဲ့ ။
အမေစုကတော့ ၀မ်းနည်းစရာ အကောင်းဆုံးပါ ။ အကြမ်း မဖက်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်တသက်ကြတော့မယ်။ သား တွေကိုတော့ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးလိုက်ပါပြီ နောက်ဆုံးအကြိမ် တွေ့ ဖို့စီစဉ်နေတာကြားရတဲ့ နောက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ဘမ်ဂါရီဆိုလားဂန္တာရီ ဆိုလား ကုလ က မဲမဲ နဲ့ တယောက်ကတော့ နေပြည်တော်မှာ သန်းရွှေကိုယ်နံ့ သွားရှူနေတာ ၈ ကြိမ်ရှိပြီတဲ့ ။
ဘင်ကီ လည်း နေပြည်တော်မှာ ရင်ဖွင့်ချင်တယ်တဲ့ဇူလိုင်ကြရင်ဆိုလား။
နောက်ဆုံး ဗမာပြည်ကြီးက ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုတော့ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ထဲက ပြည့် တဆာ အိမ်နဲ့ သာ တူပါကြောင်း ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် သက်ပြင်းချမိပါတယ် ။ ဒေါင်းTM
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Tuesday, June 30, 20090comments
သန်းရွှေ သေလို့ ကတော့ ထမင်း ၇ ရက် ရေ ၇ ရက် အငတ်ခံပြီး ကနေလိုက်မယ်
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ဆုံးပါးသွားတဲ့အတွက် စိတ်လွင့်နေလို့ သတင်းလည်း မရေး မတင်ဖြစ်ပါဘူးခင်မျာ။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Monday, June 29, 2009 1 comments
ရင်ထဲမှာ အမြဲရှိနေမယ့်မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင် (Rest In Peace Michael J)
ဤဗီဒီယိုကို အဆုံးထိကြည့်လျင် အနှစ်သာရပိုပြည့်စုံပါတယ်။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ ကျွန်တော်အမြဲတမ်း မရိုးဘဲ နားဆင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေက တော့ ( Heal The World , Dirty Diana , Thriller , Black or White , We are the world , Billie Jean ,You Are Not Alone, Somebody is watching me , I'm Bad , Beat It ) ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေပါဘဲ။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Sunday, June 28, 20090comments